कृषि बुझ्ने बैंकरको कमी छ - Karobar National Economic Daily
कृषि बुझ्ने बैंकरको कमी छ
query_builderJuly 31, 2017 1:01 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility3621
गोविन्द गुरुङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिभिल बैंक
सरकारले खर्च गरेकाले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढेको बताउने गोविन्द गुरुङले शुक्रबारदेखि सिभिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढेको भए पनि तत्काल ब्याजदर घट्ने अवस्था नरहेको गुरुङको तर्क छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि ब्याजदर घट्नका लागि ६ महिना अझै पर्खनुपर्ने उनले बताए । हिमालयन बैंकदेखि आफ्नो बैंकिङ करिअर सुरु गरेका गुरुङ ग्लोबल आईएमई बैंक, मोगा बैंक हुँदै सिभिल बैंक पुगेका हुन् ।
शैक्षिक रूपमा व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका उनी बैंकले पनि माइक्रो तथा कृषिमा लगानी गर्न सक्ने बताउँछन् । आईएमई बैंकबाट मेगा बैंकमा जाँदा पनि उनको पहिलो सर्त नै माइक्रो बैंकिङ काम गर्ने थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने लक्ष्य लिएका गुरुङ आफ्नो लक्ष्यअनुसारको काम गर्न हिमालयन बैंक र ग्लोबल बैंकमा सम्भव नदेखेपछि मेगा बैंक पुगेका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा करिब २१ वर्ष बिताएका गुरुङसँग दुईवटा वाणिज्य बैंकमा स्थापनाकालदेखि काम गरेको अनुभव छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावका सन्दर्भमा गुरुङसँग समग्र वित्तीय क्षेत्रका अवसर र चुनौतीको विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :
तपाईं करिब तीन महिना निमित्त प्रमुख कार्यकारी हुनुभयो । तपाईंलाई प्रमुख कर्यकारी अधिकृत हुन् किन ढिला भएको हो ?
पूर्वकार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौताअनुसार करार नवीकरण हुने–नहुने भन्ने सन्दर्भमा तीन महिनाअघि नै जानकारी दिने व्यवस्था रहेछ । सोअनुसार उहाँको करार सम्झौता नवीकरण नहुने अवस्थामा तीन महिनाअघि नै जिम्मेवारीबाट बाहिर हुने भन्ने रहेछ ।
त्यसका साथै हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार एउटै कार्यकारी प्रमुखले दुई कार्यकालभन्दा धेरै काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोअनुसार उहाँको करार नवीकरण नहुने भयो ।
त्यस विषयमा गत वैशाख १२ गते जानकारी गराइएको थियो । उहाँको करार नवीकरण नगर्ने भएपछि तीन महिनाको अवधिमा उहाँ कार्यकारी प्रमुखको पदमा रहेको मानिए पनि जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने करारको व्यवस्थाअनुसार ढिला भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब पुँजी पु-याउन भनेको थियो । त्योअनुसार सिभिल बैंकको पुँजी नपुग्ने देखियो नि ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु-याउने विषयमा सिभिल बैंक पनि तयार छ । हामी केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयमा पुँजी पु¥याउने बाटोमा अघि बढेका छांै ।
हाल बैंकको ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । केही दिनमै बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । हकप्रद सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ ।
त्यसमा ७५ करोड रुपैयाँको ग्याप छ । त्यसलाई हामीले मर्जरको बेनिफी प्रयोग गर्ने सोचमा छौं । बैंकमा विभिन्न वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा ५६ करोड रुपैयाँ सञ्चित कोषमा आएको छ । हामीले आईएलफसी फाइनान्स, हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स र युनिक फाइनान्स मर्जर गरेका थियांै । त्यसका साथै गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १९ करोड रुपैयाँ वितरण गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुग्ने निश्चित छ । चुक्ता पुँजीको सन्दर्भमा हामी ढुक्क छौं ।
चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु-याउनुपर्दा बैंकहरू ओभर स्ट्रेसमा छन् । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । वास्तविकता के हो जस्तो लाग्छ ?
पुँजी बढाउनु भनेको गलत होइन । बैंकलाई आन्तरिक रूपमा सबल बनाउन पुँजी आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा बैंकहरूको जोखिम बहन क्षमता वृद्धि हुन्छ । त्यसका साथै व्यवसाय वृद्धिमा पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी हुनेबित्तिकै एक बैंकले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छ ।
८ अर्ब नै अन्तिम होइन । बिस्तारै यो पनि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । तर, दुई वर्षको अवधिमा चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु सहज भने थिएन । केन्द्रीय बैंकले दिएको समय सीमा थोरै भएकाले मात्र हो ।
अहिलेको आर्थिक वृद्धि ६.९ भनिएको छ । त्यो भनेको गत वर्षको न्यून आधारका कारण धेरै देखिएको हो । औसतमा हेर्दा ३.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हो । त्यो अनुसार नेसनल सेभिङ पनि कम हुन्छ । सामान्यतः बजार हेर्ने हो भने पनि दुई वर्षको अवधिमा चार गुणा कमाइ हुँदैन । त्यो हिसाबले पनि संस्थापक तथा सेयरधनीको क्षमता विस्तार भएको छैन भन्ने हो ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि चार गुणासम्म पुँजी वृद्धिको योजना राम्रो थियो । तर, यसमा केन्द्रीय बैंकले मर्जर नै गर्नुपर्छ भनेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई उद्देश्य बनाएर पुँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि विकल्पहरू धेरै दियो ।
त्यस विषयमा केन्द्रीय बैंक लचिलो भएर मर्जर तथा कमाएर लाभांश वितरण गरेर पुँजी बढाउन भन्यो । यसले धेरैलाई सजिलो भयो । कतिपय संस्थाले मर्जरमा जाँदा संस्थापक, कर्मचारीदेखि व्यवसायसम्मको व्यवस्थापना गर्ने झन्झट मानेर मर्जरमा नगई पु-याए ।
यस विषयमा पूर्ण सही र गलत भन्ने कुरा भएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुसार पुँजी बढाउने नीति लिएको हो भने अनिवार्य मर्जरमा पठाएको भए वित्तीय प्रणालीसहित समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएका हुन् ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूले नै पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाउनुपर्छ भनेका छन् । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाअनुसार सीसीडी आवश्यक छ/छैन भन्ने सन्दर्भमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सीसीडी रेसियो मेन्टेन नगरी २० देखि २५ प्रतिशतको लिक्युडिटी रेसियो मेन्टेन गरे हुन्छ भन्ने स्कुल अफ थट पनि छ । यो थट अभ्यासमा पनि छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र तथा विकासशील अवस्थामा रहेको वित्तीय क्षेत्रको अवस्थामा सीसीडी रेसियो राखेकै ठीक हुन्छ ।
हिजोको दिनमा पुँजी नजोडेको खण्डमा प्रुडेन्सियल इन्टरनेसनल बैंकिङ नम्र्सअनुसार ८५ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपथ्र्यो । पुँजी पनि जोडेको खण्डमा ७५ देखि ८० प्रतिशत कायम गर्नु राम्रो हो ।
त्यो नराख्दाको खण्डमा पुँजी, सञ्चिति तथा तरलता व्यवस्थापन गर्ने अन्य औजार छन् भनेर कर्जा अधिक दिने अवस्था हुन्छ । कुनै समयमा नेपाली बैंकहरूले निक्षेपको १ सय १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था पनि थियो । त्यो अवस्था आउन नदिन सीसीडी वा कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात राखेर नियामक निकायले नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक धेरै हस्तक्षेपकारी भयो भन्ने छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा नियामक निकायको यति धेरै हस्तक्षेप ठीक होइन भनिन्छ । तपाईंको विचारमा के लाग्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र र बजार अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ, त्यो ठीक हो जस्तो लाग्छ । यति धेरै हस्तक्षेप र नियमन हुँदा पनि बजारमा जोखिम बढेको देखिन्छ ।
यसको दोष नियमन निकायलाई मात्र भन्दा पनि बजारका प्लेअरले लिनुपर्ने हुन्छ । बैंक–वित्तीय संस्थाले पूर्ण रूपमा सुशासन तथा नियमको परिपालना गरेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नै पर्दैन ।
हाम्रो बजारमा भएका बैंक–वित्तीय संस्थाले नियमभन्दा बाहिर गएर काम गरेका हुनाले पनि नियामक निकाय हस्तक्षेपकारी हुन बाध्य भएको हो । एक–दुई संस्थाले गर्दा नियमनकारी निकाय कडा भएको देखिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नम्र्सअनुसार समग्र हाम्रो वित्तीय बजार हेर्दा नियामक निकायले गरेको भूमिकाप्रति म सकारात्मक छु ।
सिभिल बैंक चारवटा वित्तीय संस्थासँग मर्जर भएको छ । मर्जरपछिको चुनौती के रहेछ ?
मर्जरको मुख्य उद्देश्य भनेको सकारात्मक सिनर्जी इफेक्ट हो । मर्जरको सन्दर्भमा सही पार्टनर छनोट नभएको खण्डमा सिनर्जी इफेक्ट सकारात्मक आउँदैन ।
सही पार्टनर छनोट गर्दा पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको खण्डमा समस्या आउन सक्छ । मर्जरमा सञ्चालक समायोजन, स्वप रेसियो, पोर्टफोलियो, बार्किङ कल्चर र जनशक्ति व्यवस्थापनको विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
बोर्ड तथा स्वप रेसियोमा केही समस्या छैन । कर्मचारी समायोजन पनि प्रभावकारी देखिएको छ । तर, कर्जाको सन्दर्भमा केही समस्या आएको छ । हामीले मर्जरमा जानुअघि नै यो जोखिमको परिकल्पना गरिसकेका थियौं । यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न पूर्ण तयारी गरेका छौं ।
ड्यु डिलिजेन्स (डीडीए) गर्दा सिभिल चुक्यो भनिन्छ नि, वास्तविकता के हो ?
डीडीए हामीले गर्ने होइन । हामीले स्वतन्त्र व्यवसायीलाई दिएको हो । त्यसमा चित्त नबुझेको खण्डमा हामीले थप अध्ययन गर्न लगाउने मात्र हो । हामीले पनि व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको समूहबाट डीडीए गरेको हो ।
त्यसलाई बैंकले पनि स्वीकार गरेको हो । केही कुरा डीडीए गर्दा देखिएन, तर काम गर्ने क्रममा देखियो, जुन कुराले जोखिमको लेभल केही बढाएको छ । हामीले देखेका÷नदेखेका जोखिमहरू पनि व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेका छौं ।
मर्जर हुँदा कमजोर दुई संस्था मिलेर एक बलियो संस्था बन्न सक्दैन, तर नेपालको सन्दर्भमा दुई कमजोर संस्था मिलेर बलियो बन्न सकिन्छ भनेर लागेको देखिन्छ नि ?
तपाईंले भन्नुभएको सही हो । बलियो संस्थाले कमजोरलाई साह«ै हेपेर व्यवहार गर्ने अनि कमजोर संस्थाले पनि आफू कमजोर भएको महसुस नगर्ने कारणले यस्तो देखिएको हो । मर्जरमा जाँदा बलियो र कमजोर संस्थाले आपसी समझदारीमा डिल गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा आपसी समझदारीको कमी देखिन्छ । कमजोर संस्थाले पनि आफ्नो वास्तविकता बुझ्नुपर्छ ।
मर्जरमा संस्था मात्र नभई त्यसको व्यवस्थापन कसले नेतृत्व गर्ने तथा सञ्चालक को रहने भन्नेमा लडाइँ भएको पनि दखिन्छ । यो गलत हो । मर्जरमा बलियो संस्थाले कमजोर संस्थालाई आपसी समझदारी कायम गरी लिएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारका लागि नै सकारात्मक हो । केन्द्रीय बैंकको मर्जरको नीति पनि सफल हो ।
पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढेको छ । अब त ब्याजदर पनि घट्छ होला नि, होइन ?
वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप आएको भए पनि ब्याजदर घट्न केही समय लाग्छ । बैंकहरूले निक्षेपको दर गत पुसको सुरुदेखि नै बढाउन थालेका हुन् । त्यसैगरी फागुनदेखि कर्जाको ब्याजदर बढाएका हुन् । बैंकहरूमा सेभिङमा भएको रकम पनि मुद्दतीमा परिवर्तन भयो ।
४ प्रतिशत ब्याजदरमा रहेको बचतको आधाभन्दा धेरै दोहोरो अंकको ब्याजदरसहित मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । वित्तीय प्रणालीमा नयाँ आएको निक्षेप पनि १२ देखि १४ प्रतिशतको छ । त्यसका साथै सेभिङको पनि ब्याजदर बढेको छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूलाई सेभिङ बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले ७ देखि ८ प्रतिशतको बचतले धेरै ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपलाई सब्सटान्सियट नगरेसम्म संस्थाहरूको कस्ट अफ फन्ड घट्ने अवस्था छैन । त्यसका साथै बैंकहरूले पहिले नै निश्चित समयका लागि मुद्दती निक्षेपमा कमिट गरेको अवस्था छ । त्यसैले तत्कालै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्ने अवस्था छैन ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुने समयमा मात्र सरकारी खर्च हुने परम्परा विगतदेखिकै हो । पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्नुको कारण सरकारी खर्च बढेको भन्ने छ । नेपालमा मनि सप्लाइको तथा तरलताको कमी होइन । तर, निक्षेपको कमी हो । किनकि सीडी रेसियोले कर्जा प्रवाह गर्न सीमा तय गरेको छ । कर्जाको माग बढेको छ । कर्जा बढाउनका लागि निक्षेप वा क्यापिटल नै बढाउनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो गरेर दिएको पैसाले कर्जा दिन मिल्दैन । राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा साढे २ सय अर्ब करिब ६ महिना बस्यो । त्यो जनताकै पैसा गएर बसेको हो । सरकारी ढुकुटीको पैसा वित्तीय प्रणालीमा आएको भए कि लोन घट्थ्यो, कि त बचत भएर निक्षेप बढ्थ्यो । असारमा खर्च हुनेबित्तिकै साउनको पहिलो साता निक्षेप बढेको छ । केही समयअघिसम्म वित्तीय प्रणालीमा कर्जायोग्य रकमको समस्या भयो ।
त्यसका लागि बैंकहरूले निक्षेप बढाउन खोजे । निक्षेप बढाउन खोज्दा ब्याजदर बढेको हो । यो समयमा बैंकरहरूले समग्र निक्षेप नबढेसम्म ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढ्दैन भन्ने कुरा बुझेनन् । यो बीचमा ब्याजदर बढाएर सीसीडी रेसियो पु-याउन एउटा संस्थाको निक्षेप अर्कोले तान्न थाले । त्यसो गर्दा समग्र प्रणालीको रेट बढ्न गयो ।
कतिपय सर्वसाधारणले सस्तो दरमा रहेको निक्षेपलाई पेनाल्टी तिरेर ब्रेक गरी १२ देखि १३ सम्मको रेटमा सिफ्ट गरे । भइरहेको निक्षेपमा नयाँ निक्षेप आएको भए त समस्या थिएन, तर पहिले नै वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप दर बढाएर अन्तरबैंक बा इन्टरबैंक सिफ्ट भएको हुँदा ब्याजदर बढ्यो मात्र, निक्षेप बढेन ।
सिभिल बै‌ककाे वित्तीय अवस्था (रु‍ कराेडमा)
निक्षेप बढाउनका लागि के गर्नुपर्छ ?
बैंक–वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनुपर्छ । नेसनल इकोनोमी बढेको खण्डमा पनि निक्षेप बढ्छ । यो सबै बैंकको हाताभन्दा बाहिरको कुरा भयो । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशत योगदान कृषिको छ । उत्पादन बढाएर निर्यात बढाएको खण्डमा पनि त्यो सम्भव हुन्छ । त्यसका साथै निक्षेप बढाउने अर्को माध्यम भनेको रेमिट्यान्स हो ।
कृषि उत्पादन राम्रो भए पनि अरू सबै घटेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घट्दो क्रममा छ । आयात बढेको छ । त्यसले क्रेडिट डिमान्ड पनि बढ्यो । यसलाई मद्दत पु¥याउने भनेको सरकारी खर्चले हो । बैंकबाट व्यापारीले सरकारलाई दिएको पैसा ढुकुटीमा गएकाले समस्या आएको हो ।
नेसनल सेभिङ पनि कम छ ।
पछिल्लो समयमा नयाँ राजनीतिक संरचनाअनुसार बजेट स्थानीय तहमा जाने भएको छ । यसलाई बैंकरहरू धेरै सकारात्मक छन् । हामी पनि अहिले गाउँ–गाउँमा शाखा खोल्न बैंकहरू उत्साहित छन् । तर, राष्ट्र बैंकले सरकारी कामको कारोबार रकमलाई पनि संस्थागत मानेको खण्डमा बैंकहरूलाई गाह«ो पर्छ । संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै गर्न पाइँदैन ।
बजारको संस्थागत निक्षेपअनुसारको सीमा राख्नुपर्छ । स्थानीय तहमा बजेट जानाले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्न गई कर्जायोग्य रकम उपलब्ध हुन सक्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा अबको ६ देखि ९ महिनामा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निश्चित रूपमा घट्छ ।
हुन्डीमार्फत आउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन बैंकहरूले के गरे त ?
सबै बैंकले आ–आफ्नो एजेन्ट खडा गरेर काम गरेका छन् । त्यो क्षेत्रमा विज्ञता भएका बैंकहरूले कम्पनी नै स्थापना गरेर काम गरेका छन् । सबै बैंक विदेशमा जानु आवश्यक छैन । रेमिट्यान्समा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानी गरेको खण्डमा पनि हाल काम गरिरहेका रेमिट कम्पनीहरूको बिजनेस खोस्ने काम हो । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउनका लागि जनचेतना नै मुख्य हो ।
हुन्डी नियन्त्रण गर्ने अर्को उपाय भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमबाट पनि सम्भव हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरूले संयुक्त रूपमा काम गरेको खण्डमा कम गर्न सकिन्छ । तर, पूर्ण रूपमा बन्द नै त हुँदैन । जनचेतना र नेटवर्क विस्तार गर्ने हो । त्यसका साथै विद्युतीय कारोबारको विस्तार गराउन सकेको खण्डमा केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । गैरकानुनी तवरमा कमाएको पैसालाई नियन्त्रण गर्न नै सकिँदैन ।
सर्वसाधारणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउने भयो भन्छन् नि ?
नो योर कस्टुमर (केवाईसी) को कन्सेप्ट भनेको सभ्य समाजको निर्माण हो । गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सुरु भएको अभ्यास हो । यसले समाजलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तथा नियामक निकायले अभ्यासमा ल्याएको हो ।
त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । पैसा गलत तवरबाट आम्दानी गर्न हँुदैन भन्ने पनि हो । यो भनेको गलत स्रोतको सिर्जना हुन नदेऊ भनेको हो । पैसा आम्दानी गरेपछि सम्पत्ति खरिद गर्ने हो । त्यो सम्पत्ति कहीं न कहीं प्रयोग त हुन्छ । त्यसमा कसरी सम्पत्ति खरिद ग¥यो भनेर खोज्नु सामान्य हो ।
बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्न चाहेका छैनन् । त्यसमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा बैंकरहरू अन्योलमा छन् । कृषिमा लगानी गर्दाको समस्या के हो ?
सिभिल बैंकको सन्दर्भमा कृषिमा लगानी गर्न हिचकिचाउँदैन । ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन् । मौसम राम्रो भएको खण्डमा जीडीपीमा ३५ प्रतिशत योगदान छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जीडीपीमा पनि कृषिको ६५ प्रतिशत नै योगदान हुनुपर्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने हो भने सरकार वा बैंकले कृषिमा लगानी गर्नैपर्छ । सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्ला, तर बैंकले सकेको लगानी कृषिमा गर्नुपर्छ । कृषिमा लगानी धेरै लाग्दैन । तर, प्रतिफल धेरै छ । नेपालका लागि कृषि अपरिहार्य हो । नेपालको अर्थतन्त्र विकास गर्नका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा लगानी गर्नैपर्छ ।
कृषिमा लगानी गर्न हामी उत्सुक छौं । तर, यो क्षेत्रमा दक्ष कामदार छैनन् । जोसँग कृषिसम्बन्धी ज्ञान र सीप छ, त्यो मान्छे बैंकसम्म आउन सक्दैन । बैंकहरूले लगानी गर्न चाहन्छन् । बैंकमा आएका मान्छे कृषिसम्बन्धी जानकार हुँदैनन् । पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति भएको खण्डमा हामी लगानी गर्न तयार छौं ।
अर्को पक्षबाट हेर्दा कृषिलाई बुझ्ने बैंकहरूको पनि कमी छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कृषिको लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ग¥यो । तर, कृषिमा लगानी गरेर अर्थतन्त्र नै विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइसमेत नभएका बैंकहरू पनि छन् ।
त्यसले गर्दा कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको हो । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने छ । त्यसमा पनि एकैपल्ट तोकिएको सबै लगानी नहोला । बिस्तारै सुरु भएको छ । यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
सिभिल बैंकका नयाँ योजना के छन् ?
सिभिल बैंक सात वर्षअघि स्थापना भएको हो । हाल बैंकको ३४ अर्ब निक्षेप छ भने ३० अर्बबराबरको कर्जा छ । हाल बैंकमा ५ सय कर्मचारी छन् । त्यसका साथै बैंकले ५३ शाखामार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको क्षेत्रसहित २५ शाखा विस्तार गर्ने तथा हरेक शाखामा एटीएम काउन्टर स्थापना योजनामा छौं ।
हामी कर्पोरेट लोनमा भन्दा पनि अब साना तथा मझौला कर्जामा केन्द्रित हुन्छौं । भोलिका दिनमा सिभिल बैंक एसएमई फोकस बैंक भनेर चिन्नुहुन्छ । तर, कर्पोरेट रिलेसनका लागि कुल कर्जाको ४० प्रतिशतको कर्पोरेट कर्जा प्रदान गर्छौं ।
त्यसका साथै सिभिल बैंक माइक्रो तथा कृषि फोकस बैंकका रूपमा स्थापना हुनेछ । अहिले पनि ५ हजारभन्दा धेरै ग्राहकलाई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरेका छौं । वास्तविक ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई कर्जा दिएर जीवनस्तर उकास्ने काममा हामी योगदान गर्न चाहन्छौं । बैंकलाई आगामी दिनमा प्राविधिकमैत्री भएका अघि बढ्ने छौं । बैंकका आन्तरिक तथा बाह्य कामलाई पेपरलेस बनाउने योजनामा छौं ।
हामी संस्थागत, सुशासन र नियम पालनप्रति सचेत छौं । पारदर्शी भएर पूर्ण रूपमा नियमको पालना गरेर अघि बढ्ने योजना बैंकले लिएको छ । यो विकासको चरणमा रहेको बैंक भएकाले पनि लगानीकर्तालाई धेरै प्रतिफल दिन्छौं भन्दैनांै । बजारको अवस्थाअनुसार रिजनेबल प्रतिफल दिने बैंकका रूपमा स्थापित हुनेछौं ।
वित्तीय प्रणाली नेपाल राष्ट्र बैंक सिभिल बैंक निक्षेप बैंकिङ